Izigebengu zigqekeze indlu kaR Mashesha | News24
Izigebengu zigqekeze indlu kaR Mashesha
Durban – Izigebengu zigqekeze indlu yangaphandle obekuhlala kuyo umculi weBig NUZ osanda kushona kubo eMlazi esigcemeni sakwa-D zantshontsha izimpahla ezahlukene ngokusho kombiko.
Ngokubika kweDaily Sun umndeni kaR Mashesha ubungazelele lutho bekungena kuphuma abantu bebengena bephuma bezoduduza umndeni ngemuva komshophi wokulahlekelwa uR Mashesha ogamalakhe langempela uSibusiso Khomo.
Ngokusho kukaZonke Khomo ongudadewabo kalo mculi oshone ngoLwesihlanu izigebengu zishiye indlu kamfowabo imapeketwane njengoba zebe izimpahla zokugqoka zakhe ezibizayo, amawashi ohlobo oluphambili, i-laptop yakhe yohlobo lakwa-Apple iMac, i-2015 Sony Playstation yakhe namateki.
“Sihlangane ngeSonto ebusuku senza umkhuleko, sesiqedile sothole ukuthi indlu yakhe ngaphandle egcekeni igqekeziwe.
OLUNYE UDABA: Umculi wodumo uphika eyokujola nothisha
Sicabanga ukuthi abenze lokhu bebenolwazi ngokuthi uhlala kuyiphi indlu futhi bazotholani kuyona.
Sivule amasango asekhaya ukuze abantu bakwazi ukungena bezosiduduza ngalesi sikhathi njengoba besicabanga ukuthi bazwelana nathi.
Besingazi ukuthi abantu bangasebenzisa leli thuba ukuzontshontshela u-R Mashesha ikakhulukazi ngalesi sikhathi sisahleli emakhandleleni,” kusho uZonke.
Uqhube wathi lesi senzo siwubulwane obuphindiwe ukuthi kungebiwa izimpahla zomuntu osanda kushona ongakabekwa nasendaweni yakhe yokugcina.
“Kumele sithole ukuthi ubani owenze lokhu.
Kuyacaca Ubuntu abusekho ebantwini ukuthi kukhona ongantshontshela umuntu ongakangcwatshwa nokungcwatshwa,”esho ngokunengeka.
UZonke uthe bebengakaziphothuli izinhlelo zomngcwabo walesi sihlabani somculo.